Naya Post Nepal | तपाइको यो साता कति शुभ ? हेर्नुहोस् फाल्गुन १ गते देखी ७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
तपाइको यो साता कति शुभ ? हेर्नुहोस् फाल्गुन १ गते देखी ७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) साताको प्रारम्भमा नयाँ कार्यको थालनिका निम्ती मित्रजनहरुको साथ सहयोग प्रयाप्त रुपमा प्राप्त रहनेछ । मनोरञ्जन पूर्णयात्राको योग प्राप्त रहनेछ । रोकिएर रहेका कार्यहरु सुचारु गर्न उत्तम समय रहेकोछ । बलतथा पराक्रमका कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । धार्मिक कार्यका क्षेत्रमा जुट्ने उत्तम समय रहेकोछ ।
मान्यजनहरुको साथ सहयोमा बृद्धिहुनेछ । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । आम्दानिमा सामान्य समस्या देखा पर्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ । साताको अन्त्यतिर भने स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानिको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्य सम्पादनमा सहजता उत्पन्न हुनेछ । योसाता कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनशिलताको कदर हुनेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) साताको प्रारम्भमा पुराना मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँकार्यको थालनिको योग बन्नेछ । आम्दानिका चौतर्फि बाटाँहरु फेला पर्नेछन । पशु तथा चौपायबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिनेछ । कला कौशलको प्रयोगमा साथै साहित्य संगीतका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । मगलबार पश्चात अनावश्यक यात्रकाकारण सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ ।
पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उन्पन्न हुन सक्नेछ । मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगका निम्ती अधिक खर्चको सम्भाबना रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा जिम्बेवारीको कमि महसुस रहनेछ । साताको अन्त्यमा बल तथा पराक्रममा बृद्धिहुनाले अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । ब्यपार ब्यवसायमा लगाईएका लगानिको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । साजेदारीकार्यका क्षेत्रबाट समेत मनग्य लाभ प्राप्त हुने समय रहनेछ ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) साताको प्रारम्भमा बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनि रहनेछ । भोज भतेर जन्य कार्यमा तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । कार्य क्षेत्रमा आफनो प्रभुत्व जमाउन सफल रहिनेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा जिवन साथीको सहयोग उत्तम रहनेछ । मगंलबार पश्चात भने स्थान परीर्वतनको योग रहनेछ ।
गरीरहेको कार्यमा सामान्य ढिलाईको योग रहनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुनसक्नेछ । संचित रकम खर्चगर्नु पर्ने सम्भाबना रहेकोछ । साताको अन्त्यमा बलतथा पराक्रममा बृद्धिहुनेछ । तात्कालिक यात्राको सम्भाबना रहनेछ । मित्रजनहरुको सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको योग रहेकोछ । नयाँ योजनाका साथमा नयाँ लगानिको थालनि मित्रजनहरुको सहयोगमा सम्पादित रहनेछन ।
२०७८ माघ २९, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 273 Views